युधिष्ठिर बाँचिरहेछ झुटको जीवन
- पृथ्वीराज पोख्रेल
‘सकिना धेरै दिनदेखिकी प्यासी छ, मलाई पानी भरेर जान देऊ’ अल–अब्बास इब्न अलीले हजार पटक नालाको पहरा बाँधेका सैनिकसँग अनुनय–विनय गरिसक्यो, तर पनि उमय्यत खिलाफतका सेनाको मन पग्लेन । बरु उनीहरूले अब्बासलाई हजारौँ पटक त्यहाँबाट हटाएका छन् । अब्बास तम्बुरमा फर्कंदै गर्दा इब्तदा-ए-फलसफाँ सोच्छ, ‘यी काफिरहरूको दिलमा अल्लाह छैन...! अल्लाह छैन, त्यसैले त काफिर भए...! होइन अल्लाह त कीरा-किटाणुदेखि लिएर सबैका घटमा टम्म बसेको हुन्छ । यिनीहरूको दिलमा पनि अल्लाह छ । तर, यिनीहरूलाई थाहा छैन । त्यसैले यिनीहरू काफिर हुन् ।’ उसको यो तसब्बुर सकिनाको ओइलाउँदै गएको अनुहार देखेपछि हकिकतमा आएर दुःखी हुन्छ ।
हुन त अब्बास आफू पनि राम्रो योद्धा हो । अरबी घोडसवारमा ऊजत्तिको अब्बल सायदै कोही होला ! ऊ तेगबाजी पनि एकदम तीव्रताका साथ गर्छ । अहिलेसम्म हजरत इमाम हुसैन इब्न ए अलि अर्थात् उसका खलिफाले युद्धको आदेश दिएका थिएनन्, नत्र त ऊ पानी छेकेर बसेका काफिरहरूको घाँटी काटेरै भए पनि सकिनाका लागि पानी ल्याउँथ्यो । तर, अहिले उसले केवल याचना गर्न सक्छ । सकिनाको प्यासी रुह देखेर छटपटाएको अब्बास फेरि पनि झिनो आस लिएर पानीको नालातिर लाग्छ ।
बाह्र वर्षको वनबास सकिनै लागेको थियो र अज्ञातबासको चिन्ताले पाण्डवहरूलाई सताइरहेको थियो । चिन्ताग्रस्त पाण्डवहरू भएका ठाउँमा एउटा ब्राह्मण मृगको सिङमा अड्किएको अरणी नखोजिदिए अग्निहोत्र गर्न नपाउने दुःख रूँदै सुनाउन आउँछ । ब्राह्मणको अरणी लिएर भागेको मृगको पछि लागेका पाण्डव दाजुभाइहरू द्वैतवनको घना जङ्गलमा भौँतारिएर बाटो पहिल्याउन सक्दैनन् ।
दिनभर जङ्गलमा घुम्दाघुम्दा भोकप्यासले अतास्सिएर अश्वत्थको छहारीमा सुस्ताउँछन् । युधिष्ठिरले आफू जेठो भएको नाताले नकुललाई पानी खोजेर ल्याउन अह्राउँछ । पानी लिन गएको नकुल भने यक्षको ‘माद्रिपुत्र ! यो तलाउको मालिक म हुँ, मेरो प्रश्नको जवाफ दिए मात्र यसको जल पिउन पाउनेछौ । मेरो प्रश्नको उत्तर नदिई यसको जल पिउने दुष्साहस नगर’ भन्ने वाणीको बेवास्ता गरी पानी पिउनाले बेहोस हुन्छ ।
युधिष्ठिरले त्यसपछि क्रमैसँग भाइहरू सहदेव, अर्जुन र भीमलाई पनि पानी लिन नकुल गएकाे दिशातिर पठाउँछ । अरु भाइको हालत पनि यक्षको आदेश पालन नगर्नाले नकुलको जस्तै हुन्छ । यो कुराबाट बेखबर रहेको युधिष्ठिर धेरै समयसम्म पनि भाइहरू नआएकाले खोजी गर्न त्यसै दिशातिर लाग्छ ।
याजिद प्रथम असाध्यै दुष्ट र अत्याचारी थियो । आफ्नो शासनमा गैरइस्लामिक काम गर्थ्यो । उसलाई सबै इस्लामिक कबिलाको शासक हुने भुत चढेको थियो र यसमा उसका लागि एउटा मात्रै काँडा थियो ‘७०, ७२ जना पारिवारिक सदस्य भएको हुसैन इब्न ए अलि’ अर्थात् पैगम्बर मुहम्मदका प्रिय नाति । हुसैनलाई भने इराक र कुफाका मानिसले आफूहरूकहाँ आएर आफ्नो खलिफा बनिदिन पैगाम पठाएका थिए । हुसैनले कुफा जान ढिलाइ गरे । याजिद पनि चाहन्थ्यो कि हुसैन आफ्नो पक्षमा आऊन्, जसले गर्दा अकण्टक राज्य चलाउन पाइयोस् । याजिदका लाखौँ प्रयास खेर गएका थिए । हुसैनले उसका कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् । याजिद हुसैनलाई रोक्न बाध्य भयो ।
४ मे ६८० ईस्वीमा हुसैन मदीनाको आफ्नो घर छाडेर मक्कातिर लागेका हुन् । हुसैन मक्का पुगेर हज गर्न चाहन्थे तर बाटैमा उनले ‘याजिदका सेनाहरू हाजिको भेषमा मक्का आएका छन्’ भन्ने थाहा पाए । त्यसपछि मक्काजस्तो पवित्र ठाउँमा खुन बगाउन नचाहेर हुसैनले बाटोलाई कुफातिर मोड्छन् ।
कुफातिर लागेका हुसैनको परिवारलाई लाखौँ सेनाबल भएको याजिदले बाटैमा पक्रेर करबला लिएर आउँछ । इमाम हुसैनले करबलामा आफ्नो तम्बु गाढ्ने ठाउँ किन्छन् । याजिद भने आफ्ना सरदारहरूबाट हुसैनलाई लगातार दबाब दिइरहन लगाउँछ । जति नै दबाब दिँदा पनि आफ्ना सर्तहरू मञ्जुर नगरेपछि याजिदले पानीको नाला रोकिदिन्छ ।
दुई दिनसम्म त जसोतसो हुसैनका परिवारले मन थामे । तीन दिनपछि जब बच्चाहरू भोकप्यासले तड्पिन थाले, तब हुसैनले याजिदसँग पानी मागे । तर, याजिदले पानी दिन इन्कार गर्‍यो । याजिदलाई लाग्यो- हुसैन भोक प्यासले टुट्छ र आफ्नो सर्त मञ्जुर गर्छ । तर, अब्बासजस्ताे योद्धा हुसैन यसै डग्नेवाला थिएनन् । अझै पनि हुसैनले सर्त मञ्जुर नगरेपछि याजिदले हमला सुरु गरेको थियो र हुसैनले केवल एक रातको इल्तिजा गरेका थिए आफ्ना लागि ।
आज ९ मोहर्रम ६१ हिजरी हो । अब्बास, अल तामिमी र हुसैन सोच्छन्– कसरी यी ७०-७२ आइमाई केटाकेटी लिएर लाखौँको फौजलाई जित्न सकिएला र ? उनीहरू यो युद्धको इन्तहा कसरी हुन्छ सोच्न सकिरहेका छैनन् । हुसैन र उनका योद्धा अब्बास एवं सबै जना अल्लाहको इबादतमा लाग्छन् र रातभर अल्लाहसँग दुआ माग्छन्, ‘चाहे मेरो परिवार, चाहे मेरा मित्र सहिद होऊन् । तर, अल्लाहको दिन इस्लाम जो मेरा नाना मोहम्मदले ल्याउनुभएको थियो, त्यो बाँचिरहोस् ।’
अब्बासले निराकार अल्लाहको इबादतमा आफ्नो जीवन बिताएको छ । यदि अल्लाहको आकार हुन्थ्यो भने ऊ त्यही आकार सम्झेर आक्रोश पोख्दो हो ‘केही नगरेका’ अल्लाहलाई । ऊ भन्न चाहन्छ लाइलाह- तर भन्दैन किनभने उसलाई थाहा छ- बिस्मिल्लाहरहमानिर्रहिम । उसको इबादतको पहिलो हरफ । उसको पहिलो प्रिय लफ्ज । ऊ सोच्छ- समय मैले चाहेर फेरिने रहेनछ । अहिले ऊ इमाम हुसैनसँगै इबादतमा बसेको छ र अल्लाहसँग दुआ मागिरहेछ:
‘बिस्मिल्लाहरहमानिर्रहिम । अल्लाहुम्म इन्ना नस्तअीनुक व नुअ्मिनुबिक व नतवक्कलु अलैक व नुस्नी अलैकल् खैर । व नश्कुरुक वला नकफुरुक व नख्लउ व नत्रुकु मय्यफजुरुक् । अल्लाहुम्म इय्याकनअबदु व लकनुसल्ली व नस्जुदु व इलैक नस्आ व नह्रफिदु व नरजु रहमतक व नख्शा अजाबक इन्न अजाबक बिल कुफ्फारी मुल्हिक’ । (हे अल्लाह, हामी तिम्रो सहायता चाहन्छौँ । तिम्रो क्षमादान चाहन्छौँ, तिमीमाथि नै आस्था राख्छौँ, तिमीमाथि नै भरोसा गर्छौं र तिम्रो राम्रो प्रशंसा गर्छौं । तिमीप्रति कृतज्ञता अर्पण गर्छौं, तिम्रो इन्कार गर्दैनौँ, तिमीप्रति एकाग्र हुन्छौँ र यस्ता व्यक्तिलाई त्याग्छौँ जो तिम्रो अवज्ञा गर्छन् । हे अल्लाह ! हामी तिम्रै उपासना गर्छौं र तिम्रै लागि नमाज पढ्छौँ, तिम्रै सज्दा गर्छौं र तिमीतर्फ नै दगुर्छौं । र, तिम्रै कृपाको आशा गर्छौं र तिम्रै यातनाप्रति डराउँछौं । नि:सन्देह तिम्रो यातना काफिरहरूलाई अवश्य पुग्नेछ ।)
अल्लाहको इबादतमा डुबेर कहीँ हराएको अब्बास निराकार अल्लाहको दिद-ए-हुश्न ज्योति स्वरुपमा गर्छ । ऊ गद्गद् हुन्छ, अनलहकको सदा पाएर आफ्नो अन्तरमा । अब्बासले हातमा फलामको चिसो डल्लो परेको अनुभव गर्छ । तर, उसले अल्लाहसँग पानी मागेको थियो र मागेको थियो इस्लामको सलामती । यो जता पनि घुमाउन मिल्ने डल्लो उसको के काम ? अब्बासले त्यो डल्लोलाई हेर्‍यो, जसमा गोलो गरेर अरबी अंकहरू कुँदिएका थिए । त्यो डल्लो दायाँबायाँ जता पनि घुमाउन मिल्थ्यो । अब अब्बास यसको तसब्बुर र प्रयोगमा लाग्यो । आखिर अल्लाहले दिएपछि केही राज त अवश्य नै छ ।
अब्बासले डल्लोको माथिल्लो भागलाई दायाँ र तल्लो भागलाई त्यसको विपरीत दिशामा घुमायो । डल्लो सुनौला किरणमिश्रित हरियो रङले भरियो र अब्बास एकैपटक पुग्यो आफ्नो बाल्यकालमा । मदिनाको आफ्नो घरमा, जहाँ पैगम्बर मुहम्मदको माया र आभाको न्यानो औरा थियो । मुहम्मद साहेबका सुरिला -औंलाहरूमा खेलिरहेका घामका किरणहरू देख्यो, हुसैन र ऊ खेलिरेका थिए बाल्यखेल ।
अब्बासले डल्लोको अर्थ र महत्त्व बल्ल बुझ्यो । अल्लाहले छिट्टै जहाँ पनि पुगेर आउन मिल्ने भाँडो दिएका रहेछन् उसलाई । यो डल्लो त समय पो रहेछ । अब जतिसक्दो छिटो गरेर ऊ सकिनाका लागि पानी ल्याउन चाहन्छ । पोखरी भएकाे ठाउँमा गएर आइहाल्न चाहन्छ पानी लिएर, फलामे डल्लोकाे सहायताले ।
सुदूर शान्त देशमा तलाउको कल्पना गरेर डल्लोलाई दायाँतिर दुई/तीन फेर घुमाउँछ तर डल्लोले सुनौलो रुप धारण गर्दैन, बरु बोल्छ, ‘आफ्नो यस जन्मभन्दा अगाडि जानका लागि अर्को कुनै जन्मलाई तेरो अहिलेको ठाउँमा आउनुपर्छ र तँ यहाँ फर्किनका लागि ऊ यहाँ जिउँदै हुनुपर्छ, यदि ऊ यस ठाउँमा मर्‍यो भने यो साधन पनि हराउनेछ ।’
कुरान भन्छ, 'पुनर्जन्म हुँदैन तर यहाँ अल्लाह भनिरहेछन्- अघिल्लो जन्मलाई बोला । अब्बास यति धेरै रनभुल्ल कहिल्यै परेको थिएन । तर पनि आफ्नो अघिल्लो जन्मलाई यहाँ ल्याउने सर्तमा डल्लोलाई दायाँतिर दुई/तीन पटक मज्जाले घुमाउँछ र पुग्छ ४२०० वर्षपछाडि यक्ष प्रश्नको सामना गरिरहेको युधिष्ठिरका ठाउँमा र युधिष्ठिर पुग्छ अजाँको बाँकसँगै करबलामा ।
१० मुहर्रम ६१ हिजरीको बिहानै करबलामा नमाजको समयमा नै याजिदका सैनिकले हुसैनको परिवारमाथि हमला गर्छन् । ७०–७२ जना आइमाई केटाकेटीसहितको जत्थालाई सिध्याउन लाखौँको जनबल भएको उम्यत खिलाफतलाई समय नै लाग्दैनथ्यो, त्यसैले उसले युद्धमा क्रुरता देखाउन थाल्यो ।
छमहिने बालक अली असगरको घाँटीमा तीनचुच्चे तीर घोप्दाको पीडामा अल्लाहले कुनै पीडा जनाएनन् । १३ सालको बच्चा हजरत कासिमलाई घोडाका टापले कुचाएर मार्दा फिर–ए–फलक पनि कलेजो थामेर बस्यो । सातमहिने बच्चा औन मुहम्मदको शीर शमशीरले कलम गरियो ।
इब्न ए हैदरको दुनियाँ लुटिएको थियो करबलामा । इस्लामको आस्थामाथि खेलिएको थियो करबलामा । सप्पीरको गर्धनमा छुरी चल्दा कसका आँखा रसाएनन् होला ? हबिब इब्न मुजाहिर, अल हुर इब्न याजिद अल तामिमी, हजरत इमाम हुसैन इब्न अलीलाई क्रमशः काटियो र काटियो युधिष्ठिरलाई ।
यक्षका प्रश्नले घेरिएको नवाध्युष्ठिरका हातमा रहेको फलामे डल्लो सुनौलो हरियो रङमा बिखरिएर प्रकृतिमा लय हुन्छ र लय हुन्छ अब्बासको आस चरम उदासीमा ।
अब्बासले इफ्तारपछिको एउटा दुआ कहिल्यै गर्न पाएन जो यस्तो हुन्थ्यो- जहबज्जमाउ वब्तल्लतिल् उरुकु व सबतल्अजरु इन् शाअल्लाहु (तिर्खा मेटियो, नसाहरू भिजे र पूर्ण प्रतिदान निश्चित भयो अल्लाहले चाहेमा) ।
यक्ष सोध्छ : दुःखको कारण के हो ?
अब्बास (सकिनालाई सम्झिँदै उत्तर दिन्छ ): ममता ।
यक्ष : हीनताको मूल के हो ?
अब्बास (याजिदका सेनासँग मागेको पानीको भीख सम्झिँदै): याचना
यक्ष : प्राणीहरूको प्रिय के हो ?
अब्बास : प्राण ।
यक्ष : परिवर्तनशील के छ ?
अब्बास : समय ।
यक्ष : मनुष्यको धर्म के हुनुपर्छ ?
अब्बास : परिस्थिति अनुसारको व्यवहार ।
यक्ष : यो जगतको सबैभन्दा ठूलो आश्चर्य के हो ?
अब्बास : प्रतिदिन प्राणीहरू मर्दछन् र शेष प्राणीहरू चाहन्छन् कि उनीहरू अनन्तसम्म बाँचून् । योभन्दा ठूलो आश्चर्य के हुन सक्छ ?
जहाँ पुगिन्छ, त्यहाँकै व्यवस्था र संस्कारलाई सम्मान दिँदै आफूले अपनाउनु यक्ष धर्म हो । यस्तो यक्ष धर्म अपनाएको युधिष्ठिरलाई देखी यक्ष प्रसन्न हुन्छ र चार भाइमध्ये कुनै एकलाई मात्रै जिउँदो बनाइदिने प्रस्ताव यक्षले राख्छ । ‘युद्धायकृतनिश्चय’ भएको युधिष्ठिरले युद्ध जित्नैका लागि भए पनि अर्जुनलाई जिउँदो बनाइदिन भन्छ । यसरी आफ्नो लक्ष्यमा अडिग भएको युधिष्ठिरलाई देखी यक्षले चारै भाइलाई जिउँदो बनाइदिन्छ ।
कूटनीतिमा चतुर भई अस्वत्थामालाई वाक्यमै मारिदिएको युधिष्ठिरको जमिनभन्दा माथि उड्ने रथ भुँइबाट गुड्न थाल्यो त्यतिबेलादेखि नै । र, युधिष्ठिर बाँचिरहेछ झुटको जीवन । भोकप्यासले जीवन नै संकटमा परेको युधिष्ठिरले अरुलाई यस्तो नहोस् भनी काँक्रोको सिर्जना गर्‍यो ।
परवरदिगारले सकिनालाई पानी खुवाउन त सकेन, बरु युधिष्ठिर र अब्बासको अनुहार बदल्दिन भने सके । भनिन्छ, पाण्डवहरूले कुरुक्षेत्रको युद्ध जित्नुको प्रमुख कारण युधिष्ठिर (अब्बास) काे सैन्य रणनीति र युद्धकौशल हो, जुन सोझो युधिष्ठिरले कहिल्यै जानेको थिएन ।
अर्जुनसँगको संवादमा कृष्ण भन्छन्, 'जीवनका तीनवटा आवर्तनहरू हुन्छन् । जीवनका ती तीनवटै आवर्तनलाई जसले जान्दछ, त्यही नै वास्तवमा कर्मयोगी हो ।
ठीक त्यही बेला अब्बासले जययुद्धको पाँच हजार एक सय असी वर्षपछि गोर्खा फौजबाट ६०-७० जना आइमाई केटाकेटी लिएर नालापानीमा भोकै प्यासै लडिरहेको आफ्नो तेस्रो जीवनलाई देख्छ ।
अल्लाह हू... ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २९, २०७७, ०९:००:००